नवराज कुँवर काठमाडाैं, १९ जेठ
तस्वीर स्राेत : मेख लिम्बू
‘दरवार हत्याकाण्ड’ आधुनिक नेपाली इतिहासको सबैभन्दा चर्चित र विस्मयकारी घटना हो । १९ जेठ २०५८ मा भएको यो घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्यासहित १० जनाको हत्या भएको थियो ।
यो घटनापछि नेपालमा राजतन्त्रको अधोगति सुरू भयो । अर्थात्, गणतन्त्र अध्यायको बलियो पृष्ठभूमि तयार गरेकै यही घटनाले हो ।
घटना अझै रहस्यको गर्भमा रहेकाले यो घटना घटाउने व्यक्ति, समूह, संस्था र उसको उद्देश्यबारे यसै भन्न सकिँदैन । तर, इतिहास कोट्याउने हो भने वीरेन्द्र वंशको हत्या सत्ता र शक्तिसँग सम्बन्धित थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालमा मात्र होइन, संसारका सबैजसो देशमा श्रीपेचका लागि होस् वा सत्ताका लागि छलछाम, दाउपेच, काटमार भएको विश्व इतिहासले देखाउँछ ।
गत अप्रिलमा मात्रै सत्ता भोकले रन्थनिएका दक्षिण अफ्रिकाका राजा बुयेलेखाया दालिन्दयेबोले थेबु रोयल प्यालेसमा पसेर आफ्नै छोरा तथा कार्यवाहक राजा अजेनाथी जेनेलिज्वे दालिन्दयेबोलाई मार्न खोजेका थिए ।
षड्यन्त्र गरी आफ्नो सत्ता खोसेको भन्दै उनले छोराको हत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, भाग्यवास उनका छोरा तथा कार्यवाहक राजा अजेनाथीले बेलैमा थाहा पाए र झ्यालबाट हामफालेर ज्यान जोगाउन सफल भए ।
राजतन्त्रमा दरवारभित्र त हुन्थ्यो नै, प्रजातान्त्रिक/गणतान्त्रिक प्रणालीपछि पनि सत्तामा पुगेकाहरूबीच यस्तो भइराखेको पाइन्छ । राजतन्त्र हुँदा नेपालमा सत्ता हत्याउने वा अन्य उद्देश्यले एउटा समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउन खोज्दा दरबार र भाइभारदारको उपस्थितिमा ठूला हत्याकाण्ड भएका छन् । प्रजातन्त्रपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मदन भण्डारीको ‘हत्या’मा पनि धेरैले ‘राजनीतिक उद्देश्य’ देखेका छन् । यद्यपि, यो घटना पनि रहस्यकै गर्भमा छ ।
राजतन्त्रमा चाहे श्री ५ वा श्री ३, आफ्नै वंशको हत्या गरेको कारुणिक र कालो इतिहास बढी भेटिन्छ ।
इतिहासकारहरूका अनुसार, नेपालका अधिकांश राजा कालगतिले मर्न पाएनन् । अर्थात्, उनीहरू आफ्नै भाइभारदारहरूको कुनै न कुनै षड्यन्त्रको सिकार बने । यसरी हुने घटनापछि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र परिवर्तन भएको पाइन्छ ।
विभिन्न स्रोतका आधारमा यहाँ नेपालको इतिहासमा भएका घटनाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
घटना १ : रणबहादुर शाहसहित विभिन्न व्यक्तिको हत्या
यो घटना १८६० सालमा भएको हो । घटनालाई इतिहासकार बाबुराम आचार्य ‘साठी साल पर्व‘ भन्छन् ।
काेर्टसी : मदन चित्रकार
नेपाल एकीकरणको अभियान चलाएका राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु १८३१ सालमा भयो । उनको मृत्युपछि दरवारभित्र भाइभारदारबीच मनमुटाव बढ्यो । छलकपट, दाउपेच र सत्तामा प्रभुत्व जमाउने होडबाजी चल्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहलाई उनका पिता प्रतापसिंह शाहको मृत्युपछि अढाई वर्षको उमेरमै राजा बनायो । यसपछि दरबारभित्र विवाद सुरू भएको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।
१८६० सालमा अढाई वर्षको उमेरमै राजा बनाइएका रणबहादुर शाहसहित विभिन्न व्यक्तिको हत्या भयो । यो घटनाले नेपालको इतिहासलाई अर्कै बाटोमा पुर्‍यायो ।
विभिन्न लेखकहरूका अनुसार विक्षिप्त र सन्की मानिने राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा दरबारभित्र तीन खालका शक्तिकेन्द्र रहेका र तिनले समानान्तर तीनवटा सत्ता चलाउने गरेका थिए ।
तत्कालीन परम्पराविपरीत एक विधवा बाहुनीसँग विवाह गरेका रणबहादुर शाह आफू जिउँदो हुँदै बाहुनीबाट जन्मिएका गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहलाई डेढ वर्षको उमेरमै राजा बनाएर आफू सन्न्यासी बनेर काशीतिर लागेका थिए ।
त्यस बेला दरबारमा दामोदर पाँडेसहित पाँडेहरूको प्रभाव थियो भने रणबहादुर शाहसँगै भीमसेन थापा बनारस गएका थिए । पछि रणबहादुर शाह नेपाल फर्किएर आफ्नै छोराबाट मुख्तियारी लेखाई शासनसत्तामा फर्किए ।
छोराबाट मुख्तियारी अर्थात् राजप्रतिनिधिको उपाधि लिनुपूर्व नै भीमसेन थापालगायतको सल्लाहमा त्यस बेलाका मूलकाजी दामोदर पाँडेलगायतलाई चरम यातना दिएर रणबहादुर शाहकै आदेशमा मारियो । शासनसत्ता छाडेर गएका रणबहादुर शाह काठमाडौँ फर्कँदै गरेको थाहा पाएर रोक्ने उद्देश्यले थानकोट पुगेको दामोदर पाँडे नेतृत्वको फौजका धेरै सदस्य मारिएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्रले प्रकाशन गर्ने जर्नल ’कन्ट्रिब्युसन टु नेप्लिज स्टडिज’ को सन् २००५ जुलाईमा प्रकाशित ३२(२) अंकमा गङ्गा कर्माचार्य (हाडा)ले दामोदर पाँडे र अरूलाई विसं १८६० फागुन २१ गते पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘...त्यसको २०/२५ दिनपछि भारदारहरूलाई काट्न सुरु गरियो । त्यसको पहिलो सिकार दामोदर पाँडे र उनका छोराहरू रणकेशर र राजकेशर भए । काजी भीम खवास, सरदार इन्द्रमान खत्री, द्वारे सपनसिंह, सुवेदार शङ्खधर, मानधन जम्मा आठ जना उक्त घटनामा काटिए,’ उनले लेखेकी छन् ।
घटनाबारे बाबुराम आचार्यले ’अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ मा धेरै कुरा खुलाएका छन् । उनका अनुसार १८६० सालमा सुरू भएको उक्त काटमारको सिलसिला लामै समय चल्यो । दरबारमा पाँडे खलकसहित अन्य भाइभारदारलाई पाखा लगाएर आफू शक्तिशाली बन्ने चाहनामा भीमसेन थापाले विभिन्न षड्यन्त्र गरेको पाइन्छ ।
त्यसै क्रममा रणबहादुर शाह निर्वासनमा रहँदा राज्यको ढुकुटीबाट १८ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको एउटा आरोप अघि सारेर ३ चैत १८६२ मा काजी त्रिभुवन प्रधानलाई पहिले कैद गरी मृत्युदण्ड सुनाइयो ।
तर, उनलाई मार्न भनी लगिएकै स्थानमा उनले ‘यो घटनामा अरू भाइभारदार पनि संलग्न भएकाले सबैलाई बोलाई छिनोफानो होस्’ भन्ने अर्जीपत्र दिएपछि उनलाई कैदमा सीमित गरिएको ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’मा उल्लेख छ ।
यसलाई भीमसेन थापाले विशेष अवसरको रूपमा प्रयोग गरे । १५ वैशाख १८६३ मा बेलुका काजी त्रिभुवन प्रधानकै घरमा कचहरी बोलाइयो ।
त्यसमा चौतारिया शेरबहादुर शाही तथा काजी नरसिंह गुरुङ आदिलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन भीमसेन थापाले आफ्नो मातहतका सेनालाई आदेश दिएका थिए ।
शाही र अरू भारदार उक्त कचहरीमा बेलैमा उपस्थित भए । सबैको उपस्थितिमा कचहरी सुरु हुने बेला भीमसेन थापा भने खाना खान जान्छु भन्दै बाहिरिए ।
भीमसेन थापाको अनुपस्थितिमा सुरू भएको कचहरीमा रणबहादुरले काजी त्रिभुवन प्रधानले १८ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट झिकेर मासेकोमा चौतारिया शेरबहादुर शाहीलगायत त्यहाँ उपस्थित भारदारहरूको पनि संलग्नता रहेको आरोप लगाए ।
उक्त आरोप आफूमाथि पनि लागेपछि रिसाएका शेरबहादुर शाहीले रणबहादुर शाहलाई आफ्नै तरबार निकालेर प्रहार गरे । त्यसपछि तत्कालै शेरबहादुर शाही पनि त्यहीँ मारिए ।
अन्य केही भारदार र शेरबहादुर शाहीका अङ्गरक्षक तथा नातेदारहरूको पनि हत्या भयो । त्यसको भोलिपल्ट अन्य भारदारको पनि कुनै पुर्पक्ष नगरी विभिन्न आरोप लगाएर हत्या गरियो ।
शेरबहादुर शाहीको सहयोगी ठानिएका र भीमसेन थापाले रणबहादुर शाहको हत्यामा संलग्न भनी आरोप लगाएका व्यक्तिका शाखासन्तान समाप्त हुनेगरी साना बालकहरूलाई समेत काटेर मारेको आचार्यको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
हत्याको क्रम झन्डै दुई सातासम्म चलेको थियो । त्यस क्रममा १६ महिलालाई सती पठाइएको र झन्डै ७७ पुरूषको हत्या भएको आचार्यले लेखेका छन् ।
ती दुई हत्याकाण्डकै कारण नेपालमा राजसंस्थामाथि भारदार हावी भयो । ती हत्याकाण्डले शक्तिशाली बनेका भीमसेन थापाले राजाभन्दा बलियो बनेर झन्डै ३१ वर्ष नेपालको सत्ता सञ्चालन गरे ।
ती हत्याकाण्ड र भीमसेन थापाको उदयको परिणाम के भयो भन्नेबारे आचार्यले ’अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ मा यसरी व्याख्या गरेका छन् ।
‘यसरी स्वामी महाराजको यस हत्याकाण्डबाट पुराना तात्कालिक भाइभारदारहरू प्रायः सबैको दमन भयो । मुख्तियार भीमसेन थापा तथा यिनले बनाएका आलाकाँचा भारदारहरू मात्रै सत्तामा हाबी रहे । न योग्यताको कदर भयो न अनुभवको नै । भारदारका योगदानहरूको पनि कुनै पूछ भएन । यसको प्रतिफल पछि १८७१ सालमा कम्पनी सरकारका अंग्रेज पदाधिकारीहरूसँग नेपाल अधिराज्यको अनपेक्षित रूपमा युद्ध भयो र नेपाल अधिराज्य आफ्नो अङ्गभङ्ग गराउन विवश भयो ।
घटना २ : कोत पर्व
कोत पर्व नेपालको इतिहासमा ठूलो हत्याकाण्डमध्ये एक हो । रानीको विश्वासपात्र गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउन भेला भएका भारदारहरुबीच विवाद हुँदा भएको यो घटनाले १०४ वर्षे राणा शासनको अध्याय कोरेको थियो ।
दामोदर पाँडेको हत्या र दरबारमा भीमसेन थापाको उदयसँगै थापा एवम् पाँडे खलकबीचको शक्तिशाली बन्ने होड सुरू भयो । उनीहरू एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्र रच्न थाले ।
इतिहासकारहरूका अनुसार एकतीस वर्ष सत्तामा हालीमुहाली गरेका भीमसेन थापालाई एक राजकुमारलाई विष खुवाएर मारेको अभियोगमा फसाएपछि दरबारबाट तितरबितर भएको थापा खलक पछि फेरि दरबारकै आग्रहमा सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको थियो ।
त्यस क्रममा माथवरसिंह थापा नेपालको प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति बने । तर, १९०२ सालमा उनी आफ्नै भान्जा जंगबहादुर कुँवरबाट मारिए । त्यस बेला पनि दरबारमा राजा राजेन्द्रविक्रम र रानी राज्यलक्ष्मीको दोहोरो सत्ता चलिरहेको थियो ।
त्यसैले माथवरसिंह थापाको हत्यापश्चात् रानी आफ्ना विश्वासपात्र गगनसिंह भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थिन् । तर, राजाले भने भारतमा बसेका फत्यजङ्ग शाहलाई नेपालमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाए । रानीको आग्रहमा गगनसिंहलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनाइयो ।
तर, दरबारमा रानी र उनका विश्वासपात्र गगनसिंहबीच अवैध सम्बन्ध रहेको हल्ला चल्यो । त्यसैले गर्दा राजा राजेन्द्र र युवराज सुरेन्द्र पनि गगनसिंहको विरोधी बनेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन् ।
यस क्रममा जङ्गबहादुरले चलाखीपूर्वक लाल झा नामक व्यक्तिमार्फत् भदौ १९०३ मा गगनसिंहको हत्या गराए । त्यसबाट विचलित भएकी रानी राज्यलक्ष्मीले २ असोजमा गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने नाममा सबैलाई कोतमा भेला हुन आदेश दिइन् ।
आफैँले षड्यन्त्र गरेर गगनसिंहलाई मारेका जङ्गबहादुरले यो अवसरलाई आफ्नो स्वार्थानुकूल प्रयोग गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन् । बाबुराम आचार्यका अनुसार जङ्गबहादुरले उक्त अवसरलाई आफू शक्तिशाली बन्न झन्डै पाँच सयजति सैनिक र आफ्ना भाइहरूलाई खटाएर कोत प्रवेश गरेका थिए ।
त्यहाँ छलफल र भनाभनको क्रममा सुरूमा अभिमानसिंह बस्नेत मारिएका र त्यसपछि अन्य भारदारसहित प्रधानमन्त्री फत्यजङ्ग शाहको पनि हत्या भएको थियो । आचार्यले ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ मा कोत पर्वमा मारिनेहरू २९ भाइभारदारको सूची राखेका छन् । तर, उक्त घटनामा त्यसभन्दा धेरै मानिसहरू मारिएको अरू इतिहासकारको मत छ ।
कोत पर्वबाट शक्तिशाली बनेका जङ्गबहादुरले त्यसपछि राज्यलक्ष्मीले उनलाई मार्न गरेको षड्यन्त्र पहिलै थाहा पाए ।
आफूलाई मार्न भण्डारखालमा बोलाइएको थाहा पाएर ठूलो सैन्य बलसहित त्यहाँ पुगेका जङ्गबहादुर कुँवर रानी राज्यलक्ष्मी पक्षका सबैजसो भारदारलाई मारेर थप शक्तिशाली बन्न पुगे । त्यस हत्याकाण्डलाई भण्डारखाल पर्वका रूपमा चिनिन्छ ।
जङ्बहादुरका छोरा पद्मजङ्ग राणाको पुस्तक ’लाइफ अफ महाराज सर जङ्गबहादुर राणा अफ नेपाल’ मा कोतपर्वमा मारकाट चल्दै गर्दा नै राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको सर्वोच्च पद प्रदान गरेको उल्लेख छ ।
तर, भण्डारखाल पर्वपछि जङ्गबहादुरले नै राज्यलक्ष्मीलाई सत्ताच्युत गराए अनि राजा राजेन्द्रविक्रमबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिनेगरी अधिकारपत्र लेखाएर लिए । नेपालको इतिहासमा कोत पर्वकै कारण एक सय वर्षभन्दा लामो राणा शासनको थालनी भएको थियो ।
आचार्य लेख्छन्, ‘... जङ्गबहादुर कुँवर तथा यिनका भाइहरू नै नेपाल अधिराज्यको हर्ताकर्ता भइसकेका थिए । नेपाल तथा नेपाली नागरिकहरूको भाग्यविधाता पनि अब यिनीहरू नै बन्न आइपुगेका थिए । नेपाल अधिराज्यमा राणाशाही शासनरूपी भव्य महलको जग यस दुर्दान्त हत्याकाण्डपछि नै कायम हुन आएको हो ।’
घटना ३ : बयालीस साल पर्व
इतिहासकारहरूका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको केही वर्षपछिदेखि नै नेपालको दरबारभित्र सत्ताप्राप्तिका लागि बढ्न थालेको रक्तपातको क्रम पछिसम्म रोकिएन । एउटा ठूलो रक्तपात गरेर राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका जङ्गबहादुरका उत्तराधिकारीहरूले पनि त्यस्तै रक्तपातपूर्ण बाटो रोजे ।
१९४२ मा भएकाे याे घटना बयालीस साल पर्व भनेर चर्चित छ । याे नेपालमा राणा शासन सुरू भएपछिको ठूलाे घटना हाे ।
शाहका पालामा फरक-फरक वंशबीच झगडा थियाे । तर, यहाँ एउटै वंशका बीचमा झगडा सुरू भएकाे थियाे । अर्थात राणाहरूकी २ वंश, जंग र शमशेरबीचकाे झगडा थियाे याे । जङ्गबहादुरले आफूपछि शक्ति भाइहरूमा जाने उद्घाेष गरेका थिए ।
यही घाेषणाअनुसार जङ्गबहादुरको मृत्युपश्चात् उनका भाइ रणोद्दीपसिंह प्रधानमन्त्री बने । त्यसै बेला १९३८ सालमा एउटा घटना भयो । त्यसलाई अठतीस साल पर्व पनि भनिन्छ । त्यस बेला युवराज त्रैलोक्यका भाइ नरेन्द्रविक्रम शाहद्वारा राणा प्रधानमन्त्रीलाई मारेर राजाबाट राणामा गएको शक्ति फिर्ता गराउने षड्यन्त्र भएको पत्ता लागेपछि २० जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो ।
नरेन्द्रविक्रम स्वयंलाई भारतको चुनार किल्लामा बन्दी बनाइएको थियो । उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी दरबारभित्रै त्रैलोक्यलाई विष दिएर मारेको कतिपय इतिहासकारले लेखेका छन् । सोही प्रकरणमा जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङ्गलाई पनि आरोपी बनाइएको थियो ।
त्यसै कारण तीर्थ गर्न भनी भारत गएका जगतजङ्ग नेपाल नफर्की उतै बसेका थिए । उनी भारतमै बसेकाले रणोद्दीपसिंहपश्चात् रोलक्रम पाएका उनको स्थानमा माइला भाइ जितजङ्गलाई राखिएको थियो । यो सबै प्रकरणमा धीरशमशेरको मुख्य भूमिका रहेको विभिन्न इतिहासकारले लेखेका छन् ।
त्यस बेला राणाहरू जङ्ग र शमशेर खलकमा बाँडिएको देखिन्छ । रोलक्रमलाई लिएर उनीहरूबीच बढेको त्यही अविश्वासका कारण १८४२ सालमा धीरशमशेरका छोराहरू मिलेर नारायणहिटीस्थित आफ्नै दरबारमा प्रधानमन्त्री रणोद्दीपसिंहलाई हत्या गरेको घटनालाई बयालीस साल पर्व भनिन्छ । उक्त हत्याकाण्डपश्चात् त्यसको दोष जङ्ग खलकमा लगाइएको र जङ्ग खलकका भेटेजति सबै पुरुषलाई शमशेर खलकले सिध्याएको इतिहास छ ।
इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर जबराले ‘श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्त भाग एकमा उक्त घटनाको विस्तृत विवरण दिएका छन् ।
जङ्ग र शमशेर खलकको सङ्घर्षमा परेर मारिएका रणोद्दीपसिंहबारे उनी लेख्छन्, ‘स्व. रणोद्दीपसिंह ज्यादै सोझा, धर्मपरायण हुनुका साथै निःसन्तान पनि थिए । त्यस समय नेपाल सरकारको राजनीति उनीअनुकूल थिएन ।’
इतिहासकारहरूका भनाइमा उक्त घटनाले जहानियाँ राणा शासनमा पनि जङ्ग खलकको अस्तित्व मेटिदियो र त्यसपछि शमशेर खलकले मात्र नेपालको शासनसत्तामा आफ्नो हालीमुहाली गरे ।
वीरेन्द्रको वंश नास
‘दरवार हत्याकाण्ड’ आधुनिक नेपालको सबैभन्दा चर्चित र विस्मयकारी घटना हो । १९ जेठ २०५८ को साँझ नारायणहिटी राजदरवारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहसहित उनको परिवारका रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र र निराजन तथा युवराज्ञी श्रुती शाह लगायतको १० जनाको हत्या भएको थियो ।
हत्याकाण्डमा राजकुमार धिरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ती, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्ग र अन्य राजपरिवारका सदस्यहरू पनि मारिएका थिए ।
हत्यालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘ग्रान्ड डिजाइन’को संज्ञा दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो ’ग्रान्ड डिजाइन’ के थियो र हत्या कसले र किन गर्‍यो भन्ने यकिन तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन ।
तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा गठित दरबार हत्याकाण्ड छानविन आयोगले युवराज दीपेन्द्रले नै राजपरिवारको हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, सो प्रतिवेदनप्रति आमनागरिक अहिले पनि विश्वस्त हुन सकिरहेको पाइँदैन ।
१९ जेठ २०५८ मा भएको यो हत्याकाण्डबारे तत्कालीन प्रमुख शाही पाश्र्ववर्ती सुन्दरप्रताप रानाले आफूले आँखैअगाडि देखेको त्यो दृश्यको विस्तृत वर्णन ‘दरबारको दुःखान्त’ भन्ने पुस्तकमा गरेका छन् । हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार त्रिभुवन सदनमा एउटा पारिवारिक पार्टी आयोजना गर्ने गरिएको थियो । यही पार्टीलाई वीरेन्द्रविरुद्धको षड्यन्त्र सफल पार्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
घटनाबारे रानाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् :
त्रिभुवन सदनमा हिँड्दै गर्दा महाराजाधिराजका पाइला अचानक रोकिए । म पनि पछाडि थामिएँ । सरकारले मास्तिर बिजुलीको खम्बातिर नजर फर्काइबक्स्यो । अनि मर्जी भयो, ‘यहाँको बत्ती किन बलेन ? दीपेन्द्रको एडिसीलाई तुरुन्त खबर गर ।’
मंगल सदनबाट त्रिभुवन सदन जाने बाटोका बत्तीहरू ठाउँठाउँमा बलेका थिएनन् । त्यो युवराजको निवासस्थान रहेको क्षेत्रमा पर्थ्यो । त्यसको मर्मतसम्भारका लागि त्यतैको प्रशासनले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्थ्यो । के भएर त्यस रात त्यहाँका बत्ती निभेका थिए, मलाई थाहा भएन । महाराजाधिराज स्वयंले त्यसमा चासो देखाइबक्सेपछि मैले तदनुसार मुन्टो हल्लाएँ र भने, ‘हस् सरकार ।’
त्यस क्षेत्र मैले दीपेन्द्र सरकारको निवासबाहिर बत्ती जानुलाई कुनै आश्चर्यका रूपमा लिइनँ । अहिले फर्केर हेर्दा त्यहाँको अनपेक्षित अँध्यारोले केही भनिरहेको थियो । केही मिनेटपछि आउन लागेको अनिष्टको पूर्वसूचकझैँ बन्यो त्यो । उज्यालो दीपेन्द्र सरकारको आवास क्षेत्रमा होइन, राजपरिवारको जीवनबाटै जान लागेको रहेछ ।’
करिब ९ः०५ बजेको हुँदो हो, राजाको निजी सचिव सुदन पोखरेलसँग टेलिफोन कुराकानी सकेर सवारीका निम्ति हेलिकप्टरको समन्वय गर्न पाइलटलाई फोन गर्न खोज्दै थिएँ , सिसाको ढोका हल्लिएजस्तो थर्थराहतले मेरो ध्यान भंग गर्‍यो । भुइँचालो आए जस्तो त्यो गुर्रगुर्र आवाज गोलीको होला भन्ने त मैले सुरूमा कल्पनै गरिनँ । मैले गजेन्द्रलाई भनेँ, के आवाज आयो यस्तो, हेर त ।’
गजेन्द्र बाहिर निस्किए । सिसाको झ्यालबाट बिलियर्ड हलभित्र हेर्दा त धीरेन्द्र सरकार ढलिरहेको देखेछन् । उनले आत्तिँदै सुनाए, ‘सर, धीरेन्द्र सरकार ढलिबक्स्यो । लौ बर्बाद भयो ।’
रानाका अनुसार राजा वीरन्द्र पनि हलभित्रै ढलेका थिए । आक्रमणकारीले राजा वीरेन्द्रका सन्तानलाई लखेटी लखेटी मारेका उनको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
२०५८ जेठ १९ गते त्रिभुवन सदनको बिलियर्ड हलभित्र र बाहिर बगैँचा छेउछाउ जुन सामूहिक संहार भयो, म त्यहाँ गोलीको आवाज सुनेको ८० सेकेन्ड मात्र थिएँ । त्यतिन्जेलमा हामीले बिलियर्ड हलको ढोको फुटाइ महाराजाधिराज सरकारलाई निकालेर गाडीमा हालेर अस्पतालतर्फ हिँडाइसकेका थियौँ । त्यस बेला बाहिर बगैंचापट्टि गोली चलेको आवाज आइरहेको थियो । तर, गोली कसले कसलाई हानिरहेको हो, मान्छे मैले देख्न पाइनँ । घटनास्थलमा अरु केके भएको थियो, त्यो पनि ख्याल गर्ने समय थिएन । मेरो एक मात्र ध्याउन्न वीरेन्द्र सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो अस्पताल पुर्‍याउने भन्नेमा थियो ।
त्यो कालो शुक्रबारपछि त्रिभुवन सदन ‘सिल’ गरियो । कसैलाई जान दिइएको थिएन । मैले पनि त्यहाँ एकैचोटि आठ दिनपछि पाइला टेकेँ । नयाँ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइसक्सेको थियो । उहाँहरू हतियार, औंठाछाप, फरेन्सिकललगायत विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, इन्जिनियर आदिको टोली लिएर जेठ २७ गते घटनास्थलको अवलोकन गर्न आउनुभयो ।
त्यो टोलीलाई त्रिभुवन सदनभित्र लैजाने, देखाउने र सोधेका कुरा बताउने कामको जिम्मा मलाई नै दिइएको थियो । मूलढोका खोल्नासाथ आँखाअगाडि झल्झल्ती उही जेठ १९ को कहाली सामुन्ने आयो । भित्र पस्ता मनै भरङ्ग हुने दृश्य थियो । यत्रतत्र रगत लतपतिएको देखिन्थ्यो । हत्याकाण्ड भएको डेढ दशकपछि नारायणहिटी दरबार फन्को लगाउँदा मलाई कहीँकतैको उजाड महलमा पुगेजस्तो अनुभूति भयो । इतिहासमा कति छिट्टै लेउ लागिसकेछ !’
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, १४:५१:००